राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र
काठमाडौं, पुस २५ । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नेपालको परिचय बन्दै आइरहेका बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले एक दशकदेखि विभिन्न वस्तुको निर्माण गरी अन्धकारमा दीयो जगाउने काम गरेको छ । नेपालमा आविष्कार र
काठमाडौं, पुष २२ । इजरायली सरकारले महाविर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग गरेको छ । बिहीवार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई दियो ५० थान भेन्टिलेटर
काठमाडौं, जेठ ३१ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई ५० थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । ग्राडियन हेल्थ सिस्टम युएसएले प्रदान गरेको ५० थान भेन्टीलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका–नेपाल
सौराहामा हात्ती धपाउन मेसिन जडान
चितवन । जंगली हात्तीले दुख दिन थालेपछि चितवनको सौराहामा हात्ती धपाउन मेसिन जडान गरिएको छ । पछिल्लो समय निकुञ्जबाट आउने हात्तीले स्थानीयको घर भत्काउने र बालीनालीमा क्षती पु¥याउन थालेपछि मेशीन
के गर्दैछ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र ? (भिडियो)
काठमाडौं, कात्तिक २७ । कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा उपचार सामग्रीको हाहाकार हुँदा काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यसमा भरथेक गर्ने कोसिस गर्‍यो । सुरुका दिनमा बजारमा पीपीई नपाउँदा नर्सदेखि
बिग्रेका भेन्टिलेटर धमाधम निःशुल्क बनाउँदै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र
काठमाडौं, भदौं २८ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विरामीलाई जोगाउन अत्यावश्यक पर्ने भेन्टिलेटर निःशुल्क मर्मत गरिदिएको छ । विभिन्न अस्पतालमा बिग्रेर रहेका तर कोभिडको यस महामारीमा अत्यावश्यकीय उपकरण
जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणको घोषणा
काठमाडौं, असार २९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले काठमाडौंको जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गरिने बताउनुभएको छ । डा. डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौंमा गरेको पुरस्कार वितरण समारोहमा